Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nyheter från Raadiyaha Iswiidhen
TBE waa cudur ay shillintu keento ee keeymaha laga qaado
Dr Cali Maxamed Xaaji Hiirad: Inta badan looma xanuunsado
Bishii juun ee sannadka waxaa laga diiwaan geliyey hayadda caafimaadka bulshada 13 kiis ee cudurka TBE. Halka jimcadii ina dhaaftay ey tiradaasi kor u gaadhey 74 kiis. Tiro ka hooseeysa kolka loo barbar-dhigo sannadkii tagay, hase yeeshee 30 kiis ka badan isla toddobaadkaa sannadkii 2015.
Wasiiro looga yeerey baarlamanka si loo xog wareeysto
Labo wasiir oo looga yeedhay baarlamaanka.
Siyaasad. Gudi hoosaadka baarlamaanka ee qaabilsan arrimaha difaaca ayaa maanta wax ka weeydiiyey wasiirka difaaca fadeexaddii IT:ga.
Xulka qaranka gabdhaha Sweden oo ciyaar muhiim ah caawa u hiilan
Xulka gabdhaha Sweden oo caawa la ciyaaraya xulka Talyaaniga
Caawa ayaa cayaar xiisa leh waxay dhexmari doontaa xulka kubadda cagta gabdhaha dalkaan Sweden iyo xulka qaranka gabdhaha dalka Talyaaniga.
Caawa tuma ayaa guusha hanan doonta Sweden mise Italy? SwedenItalyBarbar dhacRöstaVisa resultat 5 tim
Go’aankii rumaanka ee dilkii Gårdsten oo abiil laga qaatay
Maxkamadda rafcaanka ee galbeedka Sweden ayaa maanta la filayaa in dib la isuaga soo noqdo go’aankii rumaanka ee 51-jir lagu tuhun-san yahay dilkii xaaskiisa iyo saddex carruur uu dhalay oo ka dhacay hooy ku yaala xaafadda Gårdsten ee magaalada Göteborg.
Nin 50 jir ah oo lagu tuhunsan yahay dil reer qaraabo dhow ey yihiin
Haweeney 42 jira oo dilal loo heysto oo aan maskaxda waxba ka qabin Danbiyada.
Hey’adda sharci ahaan qiimeysa arrimaha daaweynta ee dalkaan Sweden ayaa qiimeyn ay soo saartey waxay ku sheegtey in caafimaad ahaan aysan cudur weyn oo maskaxda ah qabin haweeney 42 jir ah iyo nin saaxiibkeed ahaa oo loo heysto dilal loogu magacdarey dilalkii ka dhacey aqalada lagu nasto xilliyada kuleylaha sanooyinkii 2015-kii iyo 2016-kii.
Raysalwasaaraha ayaa la kulmaya hoggaamiyeyaasha mucaaridka Qaar mid ah wasiirada ayaa faafaahin kasiinaya baarlamaanka fadeexaddii IT:ga.
Fadeexaddii IT:ga ee hayadda gaadiidka ayaa weli socota. Wasiirka difaaca Sweden Peter Hultqvist ayaa maanta la kulmaya gudi hoosaadka baarlamaanka Sweden u qaabilsan difaaca.
Sarah Sjöström oo gashay buugga taariikhda ciyaaraha ee adduunka
Biladdii afaaraad ee adduunka
Sarah Sjöström ayaa biladdaii ugu horreeysay ee dahabka u soo hoyisay dalka Sweden ciyaaraha tartanka dabaasha 100-ka mitir ee ballanbaalista adduunka ee ka socda magaalada Budabest.
Cunista hilibka lo’da oo cirifkii ugu sarreeyay gaari doonta sannadka
Cunista khudradda hilibka badalkii oo la caadeeysaneyo
Waxaa hoos u dhacay cunistii hilibka lo’da, sida ku cad war-bixin laga soo xigtay wakaaladda beeraha. Ingela Stenson, caalimad ku takahsustay culuunta cunnada iyadoona sheegtay in cunista hilibka lo’du gaari doonto sannadka cirifkii ugu sarreeyay.
Ma dhacdaa inaad khudrad cunto badalkii hilibka lo'da?HaaMayaKama fekerinRöstaVisa resultat 10 tim
Löfven oo saxaafada la hadlay.
Raysalwasaare Stefan Löfven oo saxaafadda kula hadlay daarta madaxtooyada, iyada oo aad loo sugayay warsaxaafadeedka uu Löfven kaga hadlay fadeexaddii IT-ga ee haayadda gaadiidka.
Guuldarradii hayadda gaadiidku waxay dhalisay guuldarro wargelin
Hoggaamiyaha xisbiga Liberalerna Jan Björklund ayaa sheegay inay tahay mid lala yaabo in aanay war-bixintii hayadda gaadiidka ee IT-gu aanay gaarin madaxa dawladda Sweden.
Magangeliyada. Kuwii ugu horeeyey sharciyada deganaasho ku meel-gaar ah ee la baxiyey markii uu soo baxay sharciga cusub ee socdaalka ayaa dhici doona bisha augusti.
Sjöström oo rikoodhka dabaasha adduunka ee 100 ka mitir jebisey
Sjöström ayaa dhigtay rikoodh cusub oo dabaasha 100:ka mitir ah.
Sarah Sjöström ayaa rikoodhkii aduunka ee dabaasha 100 m jebisay xalay, iyada oo ku tartamaysay ciyaaraha aduunka ee dabaasha oo ka socda magaalada Budapest.
Dhallaanka in bilaash loogu casumo tallaalka cudurka shillinta ee TBE
Cudurka ay kento shillinta (gofane) ee ku dhaca xuubka maskaxda ee magaciisa loo soo gaabiyo TBE ayaa bilahan dambe si tartiib tartiib ah kor ugu sii kacaya.
Kufsi adag oo ka dhacay Barkarby
Saddex nin oo da’ yar ayaa rumaanka loo dhigey kadib tuhun la xiriira iney kufsi adag ka geeysteen xaafadda Barkarby oo dhacda waqooyi galbeed ee magaalada Stockholm, sida ay qortay laanta wararka idaacadda ee SVT Stockholm.
Hablaha Sweden iyo Ruushka oo caawa isku hardiyi doona garoonka
"Barbarkay ka baxdaa waa bakeeyle galeen"
Tartanka hor-yaalka kubbadda cagta hablaha ee Yurub oo ka socda dalka Nederland ayey caawa isku haleeli doonaan garoonka xulka qaranka hablaha ee kubbadda cagta Sweden iyo dhiggooda ee dalka Ruushka.
Yaa ku guuleey-san doona ciyaarta caawa?Xulka SwedenXulka RuushkaRöstaVisa resultat 4 dagar
Nin xabsiga la dhigey kadib baaris ay nabad sugiddu qayb ka ahayd
Nin 38-jir ah oo ku dhaqan magaalada Nässjöbo ayaa rumaanka lagu xukumey maadaama lagu tuhun-san yahay u diyaargarow geeysasho khatar guud iyo baabi’in.
-Waa dembiyo halis ah, sida uu sheegay Karl Melin oo ka howl-gala hayadda nabad-sugidda ee magaceeda loo soo gaabiyo Säpo.
Flera nyheter från Raadiyaha Iswiidhen
Twitter nagala soco Twitter nagala soco
Wararka aan ku Daabacno Bogga Internetka Bogga internetka ayaannu maalin walba isniinta illaa iyo jimcaha aannu war-bixinno hor leh ku daabacnaa laga bilaabo 9:30 illaa iyo 17:30. Wixii intaa dhaafsiisan waxaad wararka ka daalacan kartaan bogga internetka ee ingiriiska engelska . Sidoo kale waxaad af iswiidhishkana kaga boggan kartaan wararkiina bogga idaacadda wararka ee ekot .
Ku saabsan Raadiyaha Iswiidhen
Taageerid carbuunasho Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?